ग्राहक वफादारी बढाउँदै: Semalt बाट सुझावहरू
हरेक पुनरावर्ती ग्राहकहरु बाट प्रत्येक व्यवसाय को फाइदाहरु। अनलाइन व्यवसायका लागि, ई-कमर्स वेबसाइटहरू दोहोर्याउने ग्राहकहरूलाई उनीहरूको वेबसाइटमा प्राप्त गर्न र तिनीहरूलाई वास्तविक खरीददारहरूमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राख्दछन्। धेरै डिजिटल मार्केटिंग टेकनीकहरूले तपाईंको साइट को दृश्य को लक्ष्य को लागी वृद्धि गर्न वचन दिन्छ। यी विधिहरू मध्ये केहि सामग्री मार्केटि,, सामाजिक मिडिया दृश्यता र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, खोज इञ्जिन अनुकूलन (SEO)। जहाँसम्म, डिजिटल प्रविधिहरू तपाईंको साइटमा ग्राहकहरू पाउँदा केन्द्रित छन्। तपाइँका ग्राहकहरुलाई राख्नु अन्य प्रविधिहरूमा निर्भर गर्दछ। नयाँ ग्राहक बनाउन भन्दा अघिल्लो ग्राहकलाई खरीद गर्न सजिलो छ। धेरै जसो वेबसाइट खरीददारहरूको ध्यान अवधि न्यून छ। यस परिदृश्यको अर्थ भनेको तपाइँको वेबसाइटमा थोरै अड़चन वा गल्तीले तपाइँलाई मूल्यवान ग्राहक गुमाउन सक्छ। तपाइँको पुरानो ग्राहकहरु तपाइँको नजिक रहन एक मुश्किल उद्यम हो।
Semalt वरिष्ठ ग्राहक सफलता प्रबन्धक, निक Chaykovskiy सबै ई-वाणिज्य वेबसाइटहरु प्रदान गर्दछ निम्न ग्राहकहरु लाई ग्राहकहरु लाई कायम राख्न को लागी प्रयोग गर्न:
१. पिक्की ग्राहक बन्नुहोस्।
कुनै खास वेबसाइटको अनुभव सिक्ने उत्तम तरिका मध्ये यो एक आफै प्रयोग गरेर हो। यस विधिले सुनिश्चित गर्दछ कि तपाइँ पूरा अनुभवको मार्फत जानुहुन्छ जब एक आगन्तुकले तपाइँको साइट प्रयोग गर्दा अनुभव गर्दछ। कठिनाइहरू तपाईंले सामना गर्नु भएको खरीदको अनुभवको एक उत्तम प्रतिबिम्ब हो। यस सुविधाले तपाईंलाई तपाईंको वेब डिजाइन सुविधाहरूमा आवश्यक समायोजन गर्न उत्प्रेरित गर्न सक्छ जस्तै टुटेको लिंकहरू, हराएको उत्पादन आईडी र अर्को केसमा कोटीहरू; एकले एसईओ रणनीतिमा त्रुटिहरू पत्ता लगाउन सक्छ जस्तै डुप्लिकेट सामग्री।
२. मानव-देखि मानव स्पर्श।
मार्केटिंगको एक पुरानो विधि भनेको ग्राहकहरूसँग प्रत्यक्ष संचार हो। बजारहरूले यो प्रविधिको प्रयोग गर्छन्, र यसले अझै पनि उनीहरूको वेबसाइटहरूमा टन ट्राफिक ल्याउँछ। दिन प्रतिदिन भ्रमणले तपाईंको ई-वाणिज्य व्यवसायलाई सुरक्षित दीर्घकालीन र प्रत्यक्ष ग्राहकहरूलाई मद्दत गर्दछ। ग्राहकको साथ भेटले विश्वसनीयताको सार ल्याउँछ साथै तपाईंको व्यवसायको व्यवहार्यता बढाउँदछ। नतिजाको रूपमा, तपाईं वास्तविक व्यक्तिहरू पाउनुहुन्छ जसले तपाईंको वेबसाइट खरीद गर्न अन्य व्यक्तिलाई प्रभाव पार्न सक्छ। यसबाहेक, यो प्रविधिको प्रासंगिक वास्तविक जीवन प्रशंसापत्र ल्याउँछ, तपाईंको मार्केटिंग योजना सफल बनाउन को लागी।
It's. यो तपाईंको बारेमा होइन।
एउटा गल्ती ब्लगर्सले उनीहरूको बारेमा आफ्नो वेबसाइटहरू सिर्जना गर्नु हो। जे भए पनि, यो तपाइँको श्रोताको बारेमा हो। एक व्यवसाय को लागी आफ्नो ग्राहकहरु को लागी, गुण र प्रासंगिक सामग्री लेख्नु पर्छ। नतिजाको रूपमा, तपाईं दिगो गुणस्तर पाठकहरूको रूपमा साथै नयाँ ग्राहकहरूको स्थिर प्रवाह पाउनुहुन्छ। अन्य मामिलाहरूमा, एसईओ प्रविधिहरू जस्तै व्यक्तिगत सन्देशहरू पठाउन श्रोताहरूलाई उनीहरूको महसुस गराउनको लागि लामो यात्रा गर्दछ। त्यसकारण, याद गर्नुहोस् कि तपाइँको श्रोतालाई को आलाको स्वामित्व महसुस गर्नुहोस्। नतिजाको रूपमा, जातका वफादारी सम्बन्धी त्यस्तो भावना।
प्रत्येक ई-वाणिज्य वेबसाइट को एक ग्राहक आधार को लागी यसको रखरखाव को लागी महत्वपूर्ण नाफा को महसुस गर्न को लागी आवश्यक छ। तसर्थ, सामग्री अनलाइन पोष्ट गर्ने व्यक्तिले आफ्ना ग्राहकहरूलाई राख्न केही स्तरको लगानी गर्नुपर्दछ। तपाईंको विकल्पले क्लाइन्टहरूलाई स्टिक बनाउनु गाह्रो काम हो। ग्राहक वफादारी कुनै पनि व्यवसाय को लागी एक बहुमूल्य सम्पत्ति हुन सक्छ। यो गाईडले तपाईंको ई-कमर्स वेबसाइट र एसईओ प्रयासहरू सम्भव ग्राहकहरूलाई नजिकै राख्दछ। तपाईं आफ्नो पुरानो-समय ग्राहकहरूको विश्वास पुनः प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र फेरि नयाँ ग्राहकहरू बनाउन सक्नुहुनेछ।